Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – विमल गुरूङले राष्ट्रविरोधी वयान दिएको आरोप
विमल गुरूङले राष्ट्रविरोधी वयान दिएको आरोप, जनआन्दोलन पार्टीद्वारा गृहमन्त्रीलाई पत्रचार
डा. हर्कबहादुर छेत्री भन्छन्-
मेलाग्राउण्डमा जुन जनसभा भयो त्यसमा गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङले धेरै आपत्तिजनक कुराहरू उठाए। जसमध्ये कालेबुङलाई जिल्ला बनाउन सकिँदैन, कालेबुङलाई जिल्ला बनाउन भूटानलाई सोध्नुपर्छ, कसैले यस्तो काम गऱ्यो भने राज्य सरकार चौकिदार मात्र हो। केन्द्र सरकारलाई सोध्छौँ। केन्द्रले सकेन भने इन्टरनेशनल फोरममा लान्छौँ-भन्ने वक्तव्य दिए। जुन वक्तव्य राष्ट्रद्रोही वक्तव्य हो।
यस परिप्रेक्षमा हिजै देशका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, गृहसचिव आर. सिंह अनि राष्ट्रिय मिडियाहरूलाई पनि जनाएका छौँ।
कालेबुङ जिल्ला गठनको पोलिटिकल डिसिसन भइसकेको छ, अब एडमिन्सट्रेटिभ डिसिसन हुन बाँकी छ। अब विमल गुरूङले कसरी व्याख्या गर्नसक्छन् कि हामीले जुन सासंद जिताएर पठायौँ त्यो फरेनको भोट पाएर अहलुवालिया सासंद बनेका छन्। उनलाई तुरन्तै फर्काउनुपर्छ। म पनि फरेनको फोट पाएर विधानसभामा पुगेको हूँ भने मेरो पनि विधानसभामा जाने अधिकार छैन।
विमल गुरूङले यो कुरालाई केन्द्रले सुनेन भने अन्तराष्ट्रिय फोरमसम्म लाने कुरा गर्दैछन्। एकपल्ट यस्तै हिल्समेन एसोसिएसनले 1917 मा अङ्ग्रेजलाई एउटा चिट्ठी लेखेको थियो। हामी भिन्न छौँ, हाम्रो अरूसित केही मिल्दैन हाम्रो निम्ति अलग्गै व्वस्था गर भन्दै बरू हाम्रो हिमायल पारी बस्नेपट्टि मिल्छ भन्दै चिनलाई देखाइएको थियो। जुन कारणले गर्दा देशका नेताहरूले हाम्रो लोएलल्टीमाथि शङ्काको नजरले हेर्नथाल्यो। 1950 मा बल्लभभाई पटेलले नेहरूलाई एउटा चिट्ठी लेख्यो। जुन चिट्ठीमा पश्चिमपट्टीको सिमानामा हामीलाई डर छैन, तर उत्तरपूर्विय सिमानामा सबभन्दा खरता छ, यहाँसम्म कि दार्जीलिङका मानिसहरूले उनीहरूको लोएल्टी हाम्रोपट्टि भन्दा धेर चिनपट्टि राख्छन् भनियो। जुन कारणले गर्दा 1952 मा नेहरू जब कालेबुङ आएका थिए उनले यहाँका नेताहरूलाई भेट्न मानेनन् बरू प्रेस कन्फरेन्स गरेर, कालेबुङ स्पाईहरूको गुँड हो-भनिदिए।
यस्तो समयमा एकपल्ट सुवास घिसिङले लिजहोल्डल्याण्ड र नोम्यान्सल्याण्डको कुरा उठाए। आज फेरि आएर विमल गुरूङले यो ठाउँ भूटानको हो भनेर भन्दैछन्। अनि भोटको समय आउँदा, एमपी छान्दा, केही समस्या छैन भनेर चुपचाप बस्छन्।
यसैले यस्तै मानिसहरू, यस्तै नेतृत्वको कारणले गर्दा आज गोर्खाहरूमाथि देशमा अविश्वास बढेको छ। यो विषयलाई हामीले हाम्रो मेनिफेस्टोमा शुरूमै भनेका थियौँ। विगतमा जुन राजनीति भयो, त्यो राजनीतिले गोर्खाहरूको इमान्दारिता र राष्ट्रप्रेममाथि शङ्का उब्जाएको छ। यसैले यस्तोखालको कुनै काम हाम्रो राजनीतिमा हुँदैन भनेर भनेका थियौँ। तर हिजोमात्र विमल गुरूङले त्यही कुरा दोहोऱ्याएर गए।
यस परिप्रेक्ष्यमा हामी केन्द्र सरकारलाई यो विषयलाई त्यत्तिकै नछोडेर ठिकसँग हरेर, सम्पूर्ण गोर्खामाथि लाञ्छना लाग्नसक्ने यो विषयलाई चाँडोभन्दा चाँडो अनि सही कदम उठाएर यसलाई रोक्न अनुरोध गर्छौँ। यस सन्दर्भमा हामीले केन्द्रिय गृह-सचिव, केन्दिय गृहमन्त्री दुवैलाई पत्रचार गरिसकेका छौँ।
[via:जन आन्दोलन पार्टी]
Interview: Darjeeling‬ Girl SHAIREEN BUTT MakesaSplash in Fashion World Center to Take Over7Shut Down Duncans ‪Tea‬ Gardens
247,025 total views, 321 views today
276,545 total views, 320 views today
292,776 total views, 320 views today
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 292,793 total views, 320 views today Comments comments
292,793 total views, 320 views today
292,714 total views, 320 views today